Ninkii loo haystay argagaxisadda oo beri la keeni doono maxkamadda | WWW.SOMALILAND.NO
Ninkii loo haystay argagaxisadda oo beri la keeni doono maxkamadda
Posted on Maarso 27, 2008 by weriye1
Boliska Norway ayaa wada qorshe ey afar isbuuc oo horleh xabsiga ugu sii haynayaan muwaadinkii Somaliga ahaa ee dhawaan lagu eedeeyay falka argagixiso kaasoo bolisku sheegeen inuu lacago ku taageeray kooxda Al-Shabaab ee iminka Mareykanku ku daray liiska argagixisada kana dagaalama gudaha Somaliya.
Sideed iyo soddon jirkan somaliga ah ayaa lagu wadaa in maalinka jimcaha ah lasoo taago maxkamad taasoo go`aamineysa sida laga yeelayo walow qareenka bolisku sheegay in ey u baahan yihiin waqti dheeraad ah eyna maxkamadda ka codsan doonaan afar isbuuc oo hor leh.
Muwaadinkan ayaa bolisku ey ku haystaan in uu u diray Al-shabaab lacag lagu qiyaasay 200.000 oo norwiji ah, iyadoo lacagtaasi lagu diray qadka xawaaladda.
Dhamaadkii bishii Febraayo ayey aheyd markii afar isbuuc oo xarig ah lagu xukumay muwaadinkan, afartaasoo laba isbuuc oo ka mid ah ahaayeen kuwo la adkeynayo xarigiisa islamarkaana laga ilaalinayao wax xiriir ah oo noocwalba leh.
Ninkan ayaa waxaa lala xiray laba kale oo Somali ah kuwaasoo lasii daayay maalmo kadib markii wax cadeymo oo waaweyn ah lagu waayay walow iyagana lagu wargeliyay in ey wali ku eedeysan yihiin danbiga oo ey iska soo diiwaan galiyaan booliska labadii isbuucba mar.
Waxaa laga soo xigtay: www.calanka.com
« Obama iyo Bush oo ilmo-abti ah CUDUR-DAAR JACEYL “Qaybtii saddexaad” »